မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့ အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံ (၂/၂၀၁၄) အား ကန့် ကွက်ခြင်း | Kaladan Press Network
သို့ သော်လည်း ကော်မရှင်အနေဖြင့် ယင်းတို့ ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ထိုရွာမှ အမျိုးသမီး (၂၀၀) ကျော်ကို ဒု-ချီးရားတန်း အလယ်ရွာရှိ စာသင်ကျောင်း၌ တွေ့ ဆုံမေးမြန်ခဲ့သည်ဟု ဆင်ခြင်မဲ့စွာ ရေးသားထားသဖြင့် ထိုအရေအတွက်သည် စစ်အစိုးရ၏ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များကအနီးအနားမှ ကျေးရွာသူ/သားများအားခြိမ်းခြောက်၍ ခေတ္တခေါ်ယူ ပေးတွေ့ ခဲ့သူများ ဖြစ်ပါသည်။ချီးရားတန်းရွာသူများ မလျဉ်းမဟုတ်ပါ။တဖန် ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာထဲ၍ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ရပ်လူကြီးများအား တွေ့ ဆုံခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားရာ၊ ထိုအကြာင်းအရာသည် ဟောင်းနွမ်းနေပြီးဖြစ်သော စစ်အာဏာပိုင်တို့် ၏ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ ကော်မရှင်အဖွဲ့ မှ တွေ့ ဆုံခဲ့သူ ရိုဟင်ဂျာထဲမှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်ခဲ့သော အဆိုပါ (၅၂) ဦး ၏ စာရင်းကို ARNO မှ လက်ဝယ်ရရှိထားပြီ ဖြစ်သည့််အပြင်၊ အတည်ပြုရသည့် အခြား အသတ်ခံရသူများစာရင်းပါ စုံစမ်းရယူထားရာ၊ သေဆုံးခံရသူ စုစုပေါင်း (၉၃) ဦီးစာရင်းကိုမူ ဇွန်နဝါရီလထုတ် Arakan လစဉ်ထုတ်စာစောင် မြန်မာပိုင်းတွင်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီဖြစ်ပါ သည်။
ထို့ အပြင် ရိုဟင်ဂျာတို့ က မိမိကိုယ်ကိုရိုဟင်ဂျာဟုခေါ်ထွင်ရမည်ဟုဆိုလျှင် ထိုအချက်သည် ရိုဟင်ဂျာတို့ ၏ အခွင့်အရး တစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့ အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် ယင်းတို့ ၏အစီရင်းခံစာတွင် အဆိုပါလူမျိုး၏ အခွင့်အရေးကို လေးစားမှုမပြဘဲ ဘင်္ဂလီများဟု ရေးသားဖော်ပြလာခြင်းသည် ယင်းတို့ ၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကို ဆုံးရှုးစေလိုသည့် ဆန္ဆနှင့် တစ်ဘက်နိုင်ငံမှ မတရားခိုးဝင်လာသူများအဖြစ် အရေးယူစေလိုမှုစသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်၊ထိုကဲ့သို့ ရိုင်းစိုင်းစွာ ရေးသားဖော်ပြချက်အား ဆန့် ကျင်ရှုတ်ချပါသည်။
သို့ ဖြစ်၍ ဤမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့ အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ (၂/၂၀၁၄) သည် ပေါ်တင် လိမ်လည်မှုကြီး တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တို့မှ ညွန့်ကြားထားသည့်အတိုင်း ယင်းတို့အလိုကျ နှင့် မျက်နှာလို၊ မျက်နှာရ ရေးသားချက်များဖြစ်သည့််အပြင် အဆိုပါ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကြီး၏ မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် လွတ်လပ်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ရပ် မဟုတ်သောကြောင့် အဆိုပါ အစီရင်ခံစာအားဆန့် ကျင်ကန့် ကွက်လိုက်ပါသည်။
This entry was posted in Press Release, Rohingya and tagged ရိုဟင်ဂျာ၊ အာရ်ကာန်၊ ရခိုင်၊ မောက်. Bookmark the permalink.
← ARNO’S Protest to Myanmar National Human Rights Commission’s Statement No. (2/ 2014)
Huge Yaba tablets seized at Burma-Bangladesh border →